Android Cheats (၁) - ပိုင်ရှင်အချက်အလက် | Androidsis
အိန်ဂျယ် Gonzalez | | NOTICIAS, Android cheat, လဲ tutorial
AndroidSIS တွင်အကြံဥာဏ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအပိုင်းကိုသင်လုပ်ဆောင်နေသည် သင်၏ Android terminal များအတွက် နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများသည် android ဂေဟစနစ်နှင့်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏ဘက်ထရီကိုမည်သို့မြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းမှု၌ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းကိုမချိုးဘဲထိရောက်သောလုံခြုံရေးနည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည်။
ဒီအပိုင်းအသစ်မှာ Android မှာလှည့်ကွက်တွေအကြောင်း Android စမတ်ဖုန်း (သို့) တက်ဘလက်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာထိရောက်မှုရှိစေပြီးအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်ကူညီပေးမယ့်လျှို့ဝှက်ကိရိယာများနှင့်လှည့်ကွက်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသွားမှာပါ။ ဒီအချိန်, ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဆိပ်ကမ်းများတွင်ပိုင်ရှင်သတင်းအချက်အလက်ဖြင့် Android Cheats ကိုစတင်ခဲ့သည်။
ဒီလှည့်စားမှုကိုမစတင်မီငါဆောင်းပါးတပုဒ်ကိုပြုလုပ်သောကြောင့် terminal ပိတ်ဆို့ခြင်း၏အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများအကြောင်းပြောမည် AndroidSIS:
ဒီနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုရှိဖို့အကြံပြုလိုတယ် အကယ်၍ ဖုန်းပျောက်လျှင်၊ သူတို့သည်အန္တရာယ်ရှိသောလုပ်ရပ်များမလုပ်ပဲဒေတာထုတ်ယူရန်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
ငါ့မှာ Xperia Z ရှိတယ်။ မြေကြီးပေါ်လဲကျတယ်။ ငါမသိဘူး၊ ငါကမက်ဒရစ်ရဲ့ Gran Víaမှာပါ။ ရှင်းနေသည်မှာအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်အတွက်တစ်ခုခုကုန်ကျပြီးကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှရှာမည်မဟုတ်ပါဟုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သောသူသည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား (မည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်မသိပါ) ခေါ်ပါ့မလားသို့မဟုတ်၎င်းသည်သူမဟုတ်သော်လည်းဖုန်းကိုထိန်းထားသည့်လောဘကြီးသူနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တွင်သံသယရှိသည်။
ဘယ်သွားမလို့လဲ ပြန်ပေးလိုသူသည်၎င်းကိုတွေ့ရှိပါက၎င်းပိုင်ရှင်သည်မည်သူ့ကိုမဆိုဖုန်းခေါ်ရန်သို့မဟုတ်သွားရန်သဲလွန်စပေးရမည်။ ထိုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်«ပိုင်ရှင်အချက်အလက်":
ညွှန်ပြထားသောကဏ္inတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်မည့်စာသားအကွက်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ဖုန်းပျောက်သွားရင်သူတို့ကဖုန်းကိုပြန်ပို့ပေးလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်:
ကျွန်ုပ်ကအိန်ဂျယ်ပါ ကျွန်ုပ်နေထိုင်သည်။ ဖုန်းနံပါတ်…
"အတ္ထုပ္ပတ္တိ" ပြီးဆုံးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ထွက်သွားလိမ့်မည်။ ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသောအခါ၎င်းတွင် "ပိုင်ရှင်သတင်းအချက်အလက်" ရှိလိမ့်မည် သော့ခတ်မျက်နှာပြင်.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Android သိကောင်းစရာများ (၃) - ထိရောက်သောလုံခြုံရေးနည်းလမ်းများ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android cheat » Android Cheats (၁) - ပိုင်ရှင်အချက်အလက်
အကယ်၍ စိတ်ကောင်းသောသူတစ် ဦး တွေ့ရှိပါကကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်လကိုလများစွာတင်ခဲ့သည်
Laura B. သို့ပြန်သွားရန်
ငါ့မှာ LG G3 တံဆိပ်ရှိတယ်၊ ဘာမှမထွက်လာဘူး၊ ဘယ်မှာထားရမလဲ 'v
ကျွန်ုပ်သမီးကို ZTE ၀ ယ်ပြီးလုံခြုံရေးတွင်ပိုင်ရှင်၏အချက်အလက်ပေါ်မလာပါ။ ငါသည်လည်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှာဖွေကြပြီမဟုတ်။ အရေးပေါ်နံပါတ်ကိုသော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မည်သို့ထည့်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိတော့ပါ။ ဒီဖုန်းရှိသူတစ် ဦး ဦး မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သလား။
Nexus4နဲ့ Nexus7ကို Android 4.3 ကို update လုပ်နည်း